Fitsidihana nataon’ ireo mpianatra lalàna avy amin’ny Oniversite Mahajanga teto amin’ny Antenimierandoholona – Sénat de Madagascar
Fitsidihana nataon’ ireo mpianatra lalàna avy amin’ny Oniversite Mahajanga teto amin’ny Antenimierandoholona
June 12, 2019 Michel Hervey ANDRIANIRINA
Nandray ny Mpianatra ao amin’ny sampana “sciences politiques” taona faha-4 amin’ny Sekoly ambony momba ny lalàna avy amin’ny Oniversiten’ny Mahajanga ny Kestora Voalohan’ny Antenimierandoholona ABDIRASSOUL Mourad sy ny Sekretera Jeneraly Ramatoa Robline. Ny talata 11 jona 2019 tetsy amin’ny lapan’ Anosikely moa no nandraisana ireto mpianatra izay notarihin-dRamatoa CHAMINA Loulla Talen’ny Sekoly.
Niompana tamin’ny fanazavana ny maha zava – dehibe ny fisian’ity Andrimpanjakana faharoa ity sy ny andraikitra sahaniny eo anivon’ny Firenena sy ny vahoaka Malagasy ny fihaonana satria nifantoka bebe kokoa tamin’ny fanapahan-kevitra izay noraisin’ny Mpitondra ankehitriny momba ny Antenimierandoholona ny ankamaroan’ny fanontaniana izay napetrak’ireo mpianatra.
Anisan’ny mampiavaka azy amin’ny Antenimierampirenena hoy ny Loholona Mourad ABDIRASSOUL ny maha Andrimpanjakanan’ny fahamarinan-toerana ara-politika azy. Amin’ny maha mpisolo tena ireo Vondrom-bahoaka-paritra Itsinjaram-pahefana ny Antenimierandoholona dia mijery ifotony ny olana mianjady eny anivon’ny Kaominina, mitady ary manolotra ny vahaolana. Mba hisian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy mba hisian’ny fampandrosoana eny ifotony hoy ihany izy dia tokony ny Kaominina no mitantana ny CLD « Comité Local de Développement » fa tsy ny Solombavambahoaka, tokony mpanaramaso ihany no andraikitrin’ny Parlemantera ary koa ny Lehiben’ny Faritra dia tokony ho fidiana.
Ankoatra ireo dia mpanolotsaina ny Governemanta eo amin’ny lafiny ara-toe-karena sy ara-tsosialy ihany koa ity Andrimpanjakana ity. Nohamafisiny tamin’ity fihaonana ity ihany koa ireo zotra isan-tsokajiny rehetra tokony harahina raha hisy ny fanafoanana ny Antenimierandoholona izay hita tokoa fa tena nahaliana ireto mpianatra ireto.
Nambaran’ny Kestora voalohany fa ny Antenimierandoholona dia tsy mpanohitra fa manohana hatrany ny fandaharan’asan’ny mpanatanteraka izay hita fa mampandroso ny Firenena satria ny tombotsoan’ny vahoaka Malagasy no tena zava-dehibe ho an’ny Andrimpanjakana. Manamarina izany hoy izy ny fanomezan’ny Loholona fahefana ny Filohan’ny Repoblika hanao lalàna noho ny tsy fisian’ny Antenimierampirenena.
Afa-po tanteraka ireto vahiny nitsidika satria dia nandritra io fotoana io no nahafahan’izy ireo nampitombo kokoa ny fahalalàna momba ny Antenimierandoholona eto Madagasikara sy nandanjalanja ireo vaovao maro samihafa miparitaka mahakasika ity Andrimpanjakana ity amin’ny haino aman-jery sy gazety ary tambazotra maro isan- karazany.